dvr – NAB Show News by Broadcast Beat. Official Broadcaster of NAB Show, Producer of NAB Show LIVE
ikhaya » I-Tag Archives: i-dvr
Archives Tag: dvr
Ukusasazwa kwezeMpilo eziKhuseleyo ziHlaba lonke ixesha eliphantsi kulo nyaka
Isebenzisa ukuba amanxibelelwano omabonwakude, kunye nezinye iziteshi zamashishini, zingathembela ekuphakanyisweni okukhulu kokulinganisa nje ngokusasaza isiganeko esiphilayo. Akunandaba nento yonke into eyenziwa ngayo, ngokukhawuleza nje ukuba kwakwenzeka kwangokunjalo nakhona. Kodwa i-2016, nangona kunjalo, eso siqhinga sasinethemba elithile ngabasasazo bamabonwakude, ikakhulukazi ...
Ii-Industries ze-IO Iqalisa iNew Record-Performance Digital Recorder
I-London, NGO-Agasti 12, i-2016-IO Industries Inc. izisa uluhlu olutsha lweenkqubo zokurekhoda kwevidiyo eziphezulu zokufuna izicelo ze-camera-imaging. I-DVR Express® Core 2 MAX ngumrekhoda wevidiyo ozinzileyo ongenakunyanzelwanga kunye nokuvumelanisa okudibeneyo, iimpawu zokubeka ixesha kunye nevidiyo. ICore 2 MAX yenza umsebenzi okhawulezayo wokungena kwiivenkile ezine zevidiyo eziphambili ze-digital, ukugcina ...